Mamelona ny sakafo ny sakafo, vokarina avy ny orana, ny orana dia avy amin'ny sorona ary ny sorona dia tanterahana amin'ny alalan'ny hetsika. Fantaro fa ny fihetsika dia avy amin'ny Fanahy Lehibe izay iray; koa ny Fanahy tsy miova rehetra dia ao anatin'ny fahafoizan-tena hatrany.
Vol. 1 Martsa, 1905. Tsia
Ny sakafo dia tsy tokony ho mahazatra loatra amin'ny foto-kevitra amin'ny foto-kevitra famotopotorana. Ny sasany dia mandany ny ampahany betsaka amin'ny efatra amby roapolo amin'ny asa mba ahazoany vola ampy hividianana ny sakafo ilaina hiarovana ny vatana sy ny fanahy. Ny sasany dia manana fotoana be kokoa noho ny fandaminana izay hohaniny, ny fomba hiomanana, ary ny fomba hahafaly azy ireo sy ny fofon'ny namany. Rehefa avy nandany fotoana hamelomana ny vatany izy rehetra dia samy tafita mitovy amin'ny zavatra itovizany, dia maty izy ireo, atsahatra. Mpiasa mahatsiravina sy lehilahy manana kolontsaina, mpiasa mpanefy akanjo sy vehivavy manana ny lamaody, mpamono omby sy miaramila, mpanompo sy tompony, pretra sy pesta. Rehefa avy namahana ny vatany tamin'ny zava-maniry sy fambolena tsotra, amin'ny sakafo mahasoa sy voankazo manankarena izy ireo, ny vatany manokana kosa dia manome sakafo ho an'ny bibidia sy ny fihinanan'ny tany, ny hazandrano ao anaty ranomasina, ny voro-manidina, ny lelafo. ny afo.
Mankafy amin'ny fanjakany rehetra ny natiora. Mivoatra amin'ny endriny sy vatana izy. Ny fanjakana tsirairay dia manangana vatana mba hamintina ny fivoarana eto ambany, hanehoana ny fanjakana etsy ambony ary hahatsapa izany. Ny fitambaran'izao tontolo izao dia misy ampahany mifampiankina. Ny fizarana tsirairay dia manana fiasa roa, ho fitsipika mampahafantatra izany etsy ambany ary ho sakafo ho an'ny vatan'ny zavatra eo amboniny.
Ny sakafo dia ny sakafo na ny fitaovana ilaina amin'ny fananganana, fiasa sy ny fanohizana, ny karazana vatana rehetra, avy amin'ny mineraly ambany indrindra ka ny ambony indrindra manam-pahaizana. Ity fikolokoloana na fitaovana ity dia mivezivezy mandrakizay avy amin'ny hery amina singa amin'ny endrika mivaingana, avy eo ho lasa rafitry ny vatana sy ny vatana organika, mandra-pahatonga azy ireo ho vatan-tsaina sy hery. Noho izany, izao rehetra izao manontolo dia manome sakafo tsy tapaka.
Amin'ny alàlan'ny sakafo dia mahazo vatana sy tonga eto amin'izao tontolo izao. Amin'ny alàlan'ny sakafo dia miaina an'izao tontolo izao izy ireo. Nandao an'izao tontolo izao izy ireo. Tsy misy afa-mandositra ny lalàn'ny famerenana sy ny famerenam-bidy izay mitohy ny fizotry ny fanjakany mandritra ny fanjakany, miverina amin'ny tsirairay izay nesorina taminy fa natoky azy.
Amin'ny alàlan'ny fampiasana mety amin'ny vatan'ny sakafo dia miforona ary manohy ny fivoaran'ny fihodinan'ny rivodoza amin'ny fitomboana. Amin'ny alàlan'ny fampiasana tsy mety ny sakafo dia hiharatsy ny vatana salama ary miafara amin'ny fihodinan'ny réactionitaire ny fahafatesana.
Ny afo, ny rivotra, ny rano ary ny tany no singa, ireo singa goavambe, izay mitambatra sy mampiditra ao anaty vatolampy mitrandraka sy mineraly amin'ny tany. Ny tany no sakafon'ny legioma. Mamely ny fakany ao anaty vatolampy ny zavamaniry ary amin'ny foto-kevitry ny fiainana dia mamelatra azy ary mifidy avy eo ny sakafo ilaina hananganana rafitra vaovao ho azy. Ny fiainana no mahatonga ny zavamaniry hitombo sy hamokatra ary hitombo amin'ny endrika izay tena maneho ny tenany. Notarihin'ny instinct ary maniry ilay biby dia ny haniny ny tany sy ny legioma ary ny biby hafa. Avy amin'ny tany sy ny firafitra tsotra amin'ny zavamaniry, ny biby dia manangana ny vatany be pitsiny. Biby, zavamaniry, tany ary singa, izy rehetra dia sakafo ho an'ny olona, ​​ilay Thinker.
Sakafo roa ny sakafo. Ny sakafo ara-batana dia avy amin'ny tany, zavamaniry ary biby. Ny sakafo ara-panahy dia avy amin'ny loharanom-pahaizana manan-tsaina iray manontolo izay iankinan'ny vatana ny fisian'izany.
Ny olombelona no tena ifantohana, mpanelanelana, eo amin'ny fanahy sy ny ara-batana. Amin'ny alàlan'ny olona ny mivezivezy mitohy eo amin'ny ara-panahy sy ara-batana. Ireo singa, vatolampy, zavamaniry, biby mandady, trondro, vorona, biby, lehilahy, hery sy andriamanitra, dia mifanampy amin'ny fanohanan'ny tsirairay.
Araka ny fomba fanaon'ny lehilahy lemantelina dia mitazona sakafo ara-batana sy ara-panahy. Amin'ny alàlan'ny eritreriny dia mandray ny sakafo ara-panahy ny olona ary mampita izany amin'ny tontolo ara-batana. Mahazo sakafo ara-batana ao amin'ny vatany ny olona, ​​manaisotra ny fotony, ary amin'ny eritreriny dia afaka manova azy io ary hampiakatra azy ho ao amin'ny tontolo ara-panahy.
Ny sakafo dia iray amin'ireo mpampianatra mahay indrindra ny olombelona. Ny fampianarana ny sakafo dia mampianatra ny tsy mahalala sy tsy misaina ny lesona voalohany momba ny asa. Ny sakafo dia mampiseho amin'ny epiketika sy glutton fa ny fihinana be loatra dia miteraka fanaintainana sy aretina amin'ny vatana; ary mianatra mianatra tena izy. Ny sakafo dia votoatin'ny maizina. Mety tsy ho toy izany amin'ireo olona amin'izao androntsika izao, fa amin'ny ho avy no hahita sy hankasitraka io zava-misy io ny olona amin'ny hoavy ary hahita sakafo izay hanova ny vatany ho toy ny filaminana avo kokoa. Ny antony tsy mahavita azy ankehitriny dia noho izy tsy mahafehy ny filàny, tsy manompo ny mpiara-belona aminy ary tsy mahita ny maha-andriamanitra hita taratra ao aminy.
Ny sakafo dia mampianatra ny lehilahy mihevi-tena ho lesona momba ny fihodinana sy ny fahamarinana. Hitany fa mety haka ny vokatra sasany izy, fa mitaky sy manery ny fiovan'ny rivodoza azy izany. Raha voafehin'ny lalàn'ny fahamarinana ny olona dia lasa hendry ary ny fampakarana ny ambany ho haingam-pahefana ambony kokoa dia mampiditra azy ao amin'ny tontolo ara-panahy izay itondrany ny fitaomam-panahy.
Ny tontolo dia sakafo. Izao tontolo izao dia manome sakafo ho azy. Ny olona dia manamboatra ny sakafo rehetra ao amin'ny fanjakana rehetra eto ambany, ary misarika ny sakafo ara-panahy mandritra ny fisaintsainana. Raha hitohy ny filan'ny fivoarana, dia tokony hanolotra vatany ho ambony noho ny tenany izy. Io olona io dia miorim-paka ao amin'ny vatan'ny biby ary io no ampahany ara-panahy manan-tsaina ao anaty olombelona. Tsy iza izany fa Andriamaniny. Ny sakafo izay azon'ny olona omena ny andriamaniny dia avy amin'ny eritreritra sy ny asa tsara, ny faniriana ary ny fisaintsainan'ny fiainany. Izany no sakafo namboarin'andriamanitra toa ny fanahy. Ny fanahy dia ny heriny na ny ara-panahy amin'ny alàlan'ny fiasan'Andriamanitra sy ny saina iray.